gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource]
1 gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 5th September 2010, 2:10 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-09-01
gmail အကောင့် လိုချင်ရင် ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပါ လို့ပြောရတာကတော့ ကျွန်တော် gmail အကောင့်ဖွင့်တာ
နှစ်ခုရှိပြီ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖွင့်လိုရခဲ့လိုပါ ဖွင့်တဲ့နည်းကလွယ်လွယ်လေးပါ
ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ရှင်းပြချင်ပေမဲ့ ဓာတ်ပုံမတင်တတ်လို့ ကျွန်တော့်ဆီကို
ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာပါ ဖုန်နံပါတ်ကတော့
2 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 6th September 2010, 2:01 am
ကဲ Gmail အကောင့် မဖွင့်တက်သေးသူတွေတွက် ဒီနေရာ ကနေ တခု ပြောပြချင်ပါတယ်
လွယ်လွယ်လေး အကောင့် ဖွင့်ရင် လည်း ဖုန်းနံပါတ်တို့ ဘာတို့ မတောင်းစေရဘူး....ဟယ်ဟယ်.
ကဲ ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ............
အရင်ဆုံး မိမိမှာ gmail အကောင့် မရှိရင်လည်း သူငယ်ချင်း ကို အကူညီတောင်းပီး သူgmail ထဲ့ကို ၀င်လိုက်ပါ
ပီးရင် အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ပါ [You must be registered and logged in to see this image.]
အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာမှာ.... မိမိ လိုချင်တဲ့ အကောင့် အပြည့်စုံနာမည်ကိုရေးထည့်လိုက်ပါ ဥပမာ.[You must be registered and logged in to see this link.] ဆိူုပီးတော့ ENTER ခေါက်ပေါ့
ပီးရင် တော့ အရင် အကောင့် ဖောက်နေကျ အတိုင်းပဲ ရိုးရိုးလေး ဖောက်သွားယုံပါပဲ ဖုန်းနံပါတိ တို့ ဘာတို့ မတောင်းတော့ပါဘူး
3 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 6th September 2010, 9:02 am
မသိတာလေးတွေ သိလာရလို ့
4 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 6th September 2010, 11:51 am
We are sorry ပဲပြနေတယ်
5 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 8th September 2010, 12:45 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-09-08
6 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 8th September 2010, 10:40 pm
Oops, we weren't able to send your invite. Please try again later.
ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဗျာ.. သေသေချာချာလေး ပြောပြပေးပါလား...
7 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 11th September 2010, 10:41 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-08-08
အခုတလောမှာ google က အကောင့်တွေဖွင့်ရတာ လိုင်းကျပ်နေပါတယ်
ပုံမှန်ထိုင်နေကျအချိန်တွေ (ဥပမာ- နေ့လည်၊ ညနေ) ဘက်တွေမှာဖွင့်ရင်
We are sorry လို့ပြနေမှာ မလွဲပါဘူး
ဒါ့ကြောင့် gmail အကောင့်ဖွင့်ချင်ရင်
ညဘက် (10:00)၀န်ကျင်လောက်မှ စမ်းဖွင့်ကြည့်ရင်ရနိုင်ဖို့က သေချာသလောက်ပါ
ကို lwan wai ဆီကိုပဲဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီတောင်းလိုုက်ပေါ့နော်
8 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 17th September 2010, 2:14 pm
ကျတော့ Gmail ကို မေးပို့ပီး လိုချင်တဲ့ အကောင့်ကိုပြောပါ
ကျတော် အကုန်ဖောက်ပေးပါ့မယ့် pass ကိုတော့
တောင်းသူလက်ထဲ့ ပြန်ရောက်မှ ပြန်ပြောင်းပါ pass ပေးစရာ မလိုပါဘူး
1 နာရီတွင်း ပြန်ပို့ပေးပါ့မယ်
9 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 22nd September 2010, 10:03 am
သူ ့တို ့နိုင်ငံခြားမှာတော ့ရတာပေါ့.......
တို ့နိုင်ငံမှာလညး် ရတာပဲ လိုအပ်ရင်ပြော ......
ဖွင် ့ပေးမယ်.... ( Account ) ..နော်..
အကုန်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်.... နိုင်ငံခြားကိုု PH:
ဆက်ရင် ကုန်တယ်..နော် ပိုက်ဆံ
ဒီမှာတော့ အဆင်ပြေသလို ပေါ့........
01.553136 ext: 100 အိုကေနော်.. လိုအပ်မှပါ...
10 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 7th January 2011, 1:57 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-02-28
11 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 7th January 2011, 10:41 am
tinkonyein wrote: no. မရပါ....................
12 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 6th June 2011, 6:58 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2011-06-06
အထက်က အကိုတစ်ယောက်ပြောသလို လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒီထက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ညွန်ပြရင် အဆင်ပြေမလား မသိဘူးဗျာ။
13 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 8th June 2011, 7:09 pm
MITR ဖိုရမ်မှာပဲ လိုချင်တဲ့ နာမည်ကိုပြောပြပေးပါ မရခဲ့လိုရှိရင် အနီးစပ်ဆုံးနာမည်နဲ့
အကေင့်ရမှ Password ကို မိမိဘာသာပြောင်းလိုက်ပါ.
14 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 11th June 2011, 11:37 am
[You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့လိပ်စာနဲ့တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးပါလားခင်ဗျာ....ပြန်ပို့ပေးရမယ့် E-mail က [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
15 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 24th June 2011, 11:10 pm
လုပ်မယ်ဆိုလွယ်ပါတယ် ultra လေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လွယ်တယ် စမ်းကြည့်ပါ။
16 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 25th June 2011, 2:09 pm
mg hack wrote: လုပ်မယ်ဆိုလွယ်ပါတယ် ultra လေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လွယ်တယ် စမ်းကြည့်ပါ။
17 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 25th June 2011, 7:48 pm
U1010 လေး လိုချင်ရင်ဒေါင်းလိုက်ဗျာ
18 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 2nd July 2011, 8:40 am
19 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 2nd July 2011, 9:46 am
ရပါတယ်... [You must be registered and logged in to see this link.] ပေါ်လာရင် .. ခဏစောင့်နေ
အပေါ်ညာထောင့်နားကမှာ Please Wait ဆိုပြီး 5,4,3,2,1 cooldown လေးပြီးရင်
ှSKIP AD ဆိုတာပေါ်လာရင်နှိပ်လိုက်ယုံပဲလေ .. ဒါဆို mediafire download page ကိုရောက်ရော
20 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 17th July 2011, 11:49 am
gmailဆယ်ခုလောက်လိုချင်လို့ပါ ဘယ်သူ့စီအကူညီတောင်းရမလည်း ဘယ်နာမည်မဆိုရပါတယ်
21 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 17th July 2011, 5:57 pm
ကျွန်တော်လည်း အခုတစ်လော Gmail အသစ်လျှောက်တာမရဘူး
freedom and ultra သုံးတာလည်း verification အတွက် ဖုန်းနံပါတ်တောင်းနေတယ်
22 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 19th July 2011, 9:52 am
ငစလူ wrote: ရပါတယ်... [You must be registered and logged in to see this link.] ပေါ်လာရင် .. ခဏစောင့်နေ
အားဟား...ရသွားပီ..thanks ....very very thanks
23 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 19th July 2011, 5:10 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-05-19
24 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 20th July 2011, 11:58 pm
laminphyulin wrote: [You must be registered and logged in to see this link.] ဆိုတဲ့လိပ်စာနဲ့တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးပါလားခင်ဗျာ....ပြန်ပို့ပေးရမယ့် E-mail က [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
Password နှင့်တကွ မေလ်းလိပ်စာအား [You must be registered and logged in to see this link.] ထံ မေလ်းပြန်ပို့ထားပြီး
25 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 21st July 2011, 12:00 am
naywinhtut147 wrote: အကောင့်တခုလောက်လိုချင်လိုချင်လို.ပါ
Password နှင့်တကွ လိုအပ်သော မေလ်းလိပ်စာအား [You must be registered and logged in to see this link.] ထံသို့ မေလ်း
26 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 25th July 2011, 10:21 am
အထက်ကအကိုပြောတဲ့အတိုင်း ultrasulf နဲ့လုပ်တာအကောင့်တော့ရပါတယ်ဒါပေမယ့်မေးသုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ မေးက receive မေးတော့ရပါတယ် send mail လုပ်ရင်အကောင့်က verify လုပ်ခိုင်းပြီးပျက်သွားလို့ပါ။ စမ်းကြည့်တာလည်းအကောင့်၁၀ခုလောက်ရှိပြီပျက်သွားတာ
send mail မလုပ်မချင်းတော့ gtalk တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်မေးပို့လို့မရတော့မကောင်းဘူးပေါ့။အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိတဲ့သူပြောပေးကြပါနော်။ ကျွန်တော့အကောင့်ကတော့ [You must be registered and logged in to see this link.] ဖြစ်ပါတယ် reply လုပ်ပေးပါကြပါခင်ဗျာ.......
27 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource] on 25th July 2011, 10:27 am
အကောင့်အသစ်က gmail တော့မဟုတ်ဘူးဗျ blumail.org ဆိုတာရနေပြီလေ........
ဒီမှာ signup လုပ်လိုက်ပါ....http://bluworld.org/registration/account/signup.php
28 Re: gmail အကောင့်လိုချင်သူများ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာခဲ့ပေးပါ [Resource]